I-Lanzarote: yini ongayibona | Izindaba Zokuhamba
UMariela Carril | 30/12/2021 17:00 | Lanzarote, Yini ongayibona
I-Lanzarote iyisiqhingi I-Canary Islands, futhi kusukela ngo-1993 konke kuye Indawo Yokuhlala. Cabanga-ke ubuhle bayo! Yisiqhingi sesine ngobukhulu kuleli qembu futhi saziwa ngegama elithi "Isiqhingi sezintaba-mlilo".
Namuhla sizothola lokho ongakwazi ukuyeka bheka eLanzarote.
2 Yini ongayibona eLanzarote
Lesi siqhingi singamakhilomitha angama-140 ukusuka ogwini lwase-Afrika futhi cishe i-1000 ukusuka ezwenikazi laseYurophu. Jabulela a Isimo sezulu esishisayoImvula ina kancane kakhulu futhi isiqongo sayo esiphezulu yiLas Peñas del Chache engamamitha angu-671 ukuphakama.
Njengoba sishilo ekuqaleni ngo-1993 i-UNESCO yamemezela Indawo Yokuhlala futhi nakuba ngokwesiko inikezelwe kwezolimo nokudoba isikhathi esithile kule ngxenye umnotho wayo ngokuyisisekelo usebenza mayelana nezokuvakasha.
Yini ongayibona eLanzarote
Ukubizwa ngokuthi "isiqhingi sezintaba-mlilo" into yokuqala okufanele uyibone yizintaba-mlilo. Nakuba zingakaqhumi kusukela ngo-1824, zisasebenza futhi umsebenzi owenzeka phakathi nekhulu le-XNUMX ulungise ukukhululeka nge- indawo emangalisayo egcwele i-basalt okuhlanganisa isiqhingi cishe ingxenye yesine. Namuhla cishe yonke i-National Park ngakho-ke sine I-Timanfaya National Park.
Iqiniso ukuthi lokhu indawo yenyanga Kuyinto enhle futhi nakuba kuyingozi ukuyihlola ngezinyawo ungaqasha a ukuvakasha kwebhasi Lokho kukuthatha ubone umfula udaka kanye nemigodi engaba ngu-25. E-Montañas de fuego uzobona abaqondisi abanesibindi bengena emgodini ongajwayelekile futhi endaweni yokudlela yase-El Diablo izitsha ziphekwa kusetshenziswa ukushisa kwe-geothermal. Isimangaliso. Uma ufuna okuthile kwesimanjemanje ke zizwe ukhululekile ukuhlola in a Imoto kagesi iTwizy.
Leli paki likumasipala waseTinajo naseYaiza kanye Iyipaki yezwe yesibili ngenani lokuvakashelwa. Ibe yipaki kazwelonke kusukela ngo-1974 futhi ithatha indawo engamakhilomitha-skwele angama-52, eningizimu-ntshonalanga yesiqhingi.
Okunye okukhangayo kwemvelo yi I-Jameos del Agua Caves. Kuwuhlelo lwe imigede engaphansi komhlaba ngezinye izikhathi evulekela esibhakabhakeni nokuthi namuhla ziqukethe i-swimming pool, ihholo nendawo yokudlela. Zonke zakhiwe phakathi kwamadwala namanzi ehla ezindongeni.
Cishe kuyindawo emnandi futhi kwaba njalo idalwe ngumculi uCésar Manrique. Uma kushona ilanga umculo uyavuleka bese kuba nemicimbi ye-gastronomic ngakho nibe namaphathi. Isitayela sikaJames Bond? Kungaba njalo. Uhlelo lomhume lungahlolwa ngosizo lomhlahlandlela.
Enye indawo lapho uya khona yi- Idolobhana laseHaría, esiqongweni segquma, phakathi kwezitshalo zasezindaweni ezishisayo, izindlu ezimhlophe nezihlahla zesundu. Lapha kulapho kunendlu yomculi esimqambe igama ngaphambili, uCésar ManriqueNgaphezu kwalokho, indawo eyingqayizivele lapho ungabona isitudiyo sakhe esidala, konke okwake kwaba yipulazi elinezakhiwo zesiqhingi zendabuko. I-museum ivulwa nsuku zonke kusukela ngo-10: 30 ekuseni kuya ku-6pm futhi ukungena kubiza ama-euro angu-10.
Indawo endala kunazo zonke eCanary Islands yiTeguise, idolobha elasungulwa ngo-1402. Kwakuyinhloko-dolobha yesiqhingi iminyaka engu-450 futhi isendaweni ephakeme. Igcina izakhiwo eziningi ezibalulekile, izihlahla zesundu nezikwele futhi ngeSonto kwakhiwa imakethe ebabazekayo lapho ungathenga khona yonke into kusukela kushizi kuya ezikhwameni zesikhumba. Futhi uma uke wamthanda uManqrique kanye nendalo yakhe, ungavakashela enye indlu eyakhiwe ngodaka nemigede eNazaretha elingumakhelwane.
Omunye idolobhana elithakazelisayo nelibukekayo, kodwa enyakatho-mpumalanga yesiqhingi, likhona Arrieta. Inobuhle ebhishi lesihlabathi esimhlophe, Playa de La Garita, kanye nensika enezikebhe zokudoba. Yindawo elula futhi enhle yokudla ngoba lapha I-Marriquería el Charcon, khona lapho ku-pier kanye nokubanjwa kosuku. Ukupholisa akunakwenzeka.
Uma uthanda i-cacti kufanele uvakashele i-cacti I-Cactus GardenKunabo bonke osayizi nezinhlobonhlobo, ezisatshalaliswa njengasenkundleni yemidlalo yaseshashalazini enkwalini endala. Yebo konke lokhu futhi Umsebenzi kaCésar Manqrique. Kukhona Izibonelo ezingama-4500 zezinhlobo ezingama-450 futhi vele kunebha / indawo yokudlela ethengisa amabhega amise okwe-cactus namajusi amasha.
Okweminyuziyamu kukhona I-Museo Atlántico, imnyuziyamu yokuqala engaphansi kwamanzi eYurophu, eduze Marina Rubicon. Le marina esebenzayo enamakhefi abheke ulwandle futhi isekupheleni kwedolobha lasePuerto del Carmen, izivakashi eziningi futhi umsebenzi mahhala. Ngaphansi kolwandle kunezithombe zikakhonkolo nemifanekiso eyenziwe umdwebi uJason deCaires Taylor.
Isikhathi siye sabangela ukuba zonke ziqoqwe yizilwane zasolwandle ngakho kuwumbukwane wangempela. Futhi yebo, indawo enhle ongaya kuyo ukutshuza ekujuleni okungamamitha ayi-12.
Futhi kukhona amachibi emvelo lapho ungakwazi ukubhukuda. Imayelana namachibi olwandle akhona ogwini olusempumalanga naseningizimu nokuthi azilutho ngaphandle kokwakheka kwamadwala emvelo okufakwe kuzo izinyathelo ezimbalwa ukuze kufinyeleleke kalula futhi kukhululeke. Babuka olwandle kodwa bangamanzi azolile futhi alungele ukubhukuda. Ngokwesibonelo, I-Punta Mujeres enyakatho futhi I-Charcones eduze kwasePlaya Blanca.
Isikhala iwumkhakha wogu olusentshonalanga yesiqhingi, a ugu olumangelengele lwentaba-mlilo izakhamuzi eziye zazisebenzisa ukuthola amathilomu nezindawo zokudlela. Igagasi lezikhathi ezithile likhipha amazolo futhi libe manzi kodwa ukubuka kuyakufanelekela. Ngokuvamile, labo abavakashela i-El Golfo bayavakashela Amathumba, enye ye izindawo ezinhle kakhulu zokubona amandla olwandle eduzeo.
Ngakolunye uhlangothi, uma uthanda ukuntweza kukhona iFamara. Abatshuzi abavela kuwo wonke umhlaba beza lapha, kulesi sihlabathi esingamakhilomitha amahlanu, nedolobhana eliseduze, izindawo zokucima ukoma namakhefi namahostela. I Papagao Beach Lihle kakhulu kodwa empeleni akulona ulwandle olulodwa kodwa eziyisikhombisa, noma kunalokho, uchungechunge lwamabhishi aphuzi ngokuphaphathekile eningizimu, ahlukaniswe amadwala odaka.
Bavikelwe ngakho akukho misinga namanzi aphephile. Yebo akuwona wodwa amabhishi eziqhingini, empeleni kukhona ulwandle lwesihlabathi esimnyama sasePlaya del Charco de los Clicos olunamawa abomvu kanye nechweba eliluhlaza okwesibhakabhaka, uma kwenzeka ufuna imibala eyengeziwe, kodwa lena inesihlabathi esithambile kakhulu. futhi ukubhukuda kuphephe kakhulu.
Umgede Wezihlaza yithuba elihle kakhulu loku ngena epayipini le-lava eqinile. Kukhona izinkambo! Futhi ngeke sikhohlwe inhloko-dolobha yesiqhingi, i-Arrecife, eduze kwesikhumulo sezindiza, noma abanomusa, ofika ngesikebhe usuka e-Mirador del Río. Ingabe a isiqhingi esincane esinabahlali abambalwa, asinamigwaqo egandayiweKubi kakhulu lapho ungaqasha khona ibhayisikili uhambe uyoshaywa umoya ukuze uthole amabhishi alo.
Ekugcineni, alukho uhambo ngaphandle kokudla neziphuzo futhi kulokhu I-Lanzarote inamawayini amahle futhi kufanelekile ukuzama. Izitolo zamawayini namasimu zikhona i-geria, isigodi esiyindawo yokulima iwayini kulesi siqhingi. Futhi ukudla kuhlala kunambitheka ezindaweni zokudlela nasezimakethe, kunjalo.
Uhambo losuku? Fuerteventura. Iwela isikebhe, ungavakashela eCorralejo kanye neCorralejo National Park bese ubuyela eLanzarote kusihlwa.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » Spain amadolobha » Lanzarote » Lanzarote: yini ongayibona